Xubnaha laga saaray Guddiyada Doorashooyinka oo ku dhowaad la’eg kuwa kusii jira (Akhri shuruudaha la iska doonayo) | Hadalsame Media
Home Wararka Xubnaha laga saaray Guddiyada Doorashooyinka oo ku dhowaad la’eg kuwa kusii jira...
Xubnaha laga saaray Guddiyada Doorashooyinka oo ku dhowaad la’eg kuwa kusii jira (Akhri shuruudaha la iska doonayo)
(Muqdisho) 06 Juun 2021 – Guddiga loo saaray Xaqiijinta Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka ee uu magacaabay RW Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta shaaciyey in ilaa 34 xubnood laga tuuray taxa Guddiyada Doorashooyinka ee heerarka kala geddisan ee Federaal iyo Gobol.
Guddiga Xaqiijinta Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka ayaa sheegay in kaddib baaris ay sameeyeen ay usoo baxday in Guddiyada laga saaro 34-kan xubnood oo jebinaya hab-raaca looga baahan yahay dhexdhexaadnimada qofka xubin noqonaya.
Waxaa haatan xigi doona in muddo 48 saacadood gudahood ah lagu soo magacaabo isla xubnihii bedeli lahaa xubnahan laga cayriyey Guddiyada Doorashooyinka, sida ay sheegeen Xaqiijinta Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka.
Warar hoose ayaa sheegaya in xubnaha horay loo qoondeeyey in la xooro ay aad uga badan yihiin 34-ta xubnood ee haatan lagu dhawaaqay ee ay gaarayeen ilaa 50 xubnood, balse cadaadis uu ka yimid dad aan carrabaabin oo ku adkaystay in aan la saarin xubnaha qaar.
Yeelkeede, xubnaha la saaray qiyaastii kala bar ku dhowaan uun ka 67 xubnood oo ay Middowga Musharaxiintu u gudbiyeen RW Rooble si looga saaro guddiyadan, taasoo ka dhigan in 33 xubnood oo muran ku jiraa ay weli xubno ka yihiin Guddiyadan.
Halkan ka akhri shuruudaha laga doonayo Guddigan:
Previous articleAMISOM oo qoraal kasoo saartay duqaymaha Kenya (Eray ay afkeeda ka dhowrtay)
Next articleMagaalo ka tirsan Somalia oo 90% korontadeeda ka hesha tamarta qorraxda (Daawo gabar injineeriyad oo…)